Ra'iisul Wasaare Kheyre Oo Bogaadiyay Madaxda Maamulka Puntland * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mudane Khayre, ayaa sheegay in shacabka Puntland ay yihiin dad ku caan baxay nabad jaceyl, dawlad jaceyl iyo inay ka shaqeeyaan horumarka guud ee Soomaaliya.
Wuxuna ugu baaqay inay sii xoojiyaan ka shaqeynta horumarka iyo sidii dib loogu yagleeli lahaa qaran Soomaaliyeed oo xoog leh, isagoo u rajeeyey inuu Alle u siyaadiyo horumarkaasi ay gaareen.
“Waxaan hambalyo u dirayaa Shacabka iyo madaxda Puntland oo shalay u dabaal degaya sanad guuradoodii 19-aad.
Puntland waxay tusaale fiican u tahay Soomaaliya inteeda kale.
Waxay si wadajir ah uga shaqeeyeen nabadda, waxayna ku gaareen amni iyo horumar ballaaran” ayuu yiri R/Wasaare Khayre.